Matongerwo eNyika, 04 Zvita 2017
Muvhuro 4 Zvita 2017
Nyanzvi Dzozeya Dare reMakurukota aVaMnangagwa
Vachitaura kumucheto kwemabiko ekutoresa mhiko makurukota avo kuState House muHarare neMuvhuro, mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vati vane chivimbo chekuti vachabudirira.
Vanhu Makumi Maviri neVaviri Vanofa Mutsaona kuTsholotsho
Imwezve tsaona yakatora hupenyu hwevanhu makumi maviri nevaviri ku Tsholotsho ku Matabeleland North neMugovera.
Vamwe vanhu vari kuchema-chema vachiti komiti yeparamende inoona nezvemitemo yavashaisa mukana wekupa maonero avo pamusoro pemitemo miviri iri kuda kugadziriswa, inoti Electoral Amendment Bill pamwe neInsolvency Bill.
Huwandu hweMadzimai Akazvitakura Ari Kuonekwa neNyanzvi Hwokwira
Madzimai akazvitakura muZimbabwe ari kukoshesa kuenda kune vezveutano kunoongororwa nhumbu dzavo inonzi pachirungu Antenatal Care visits “ANC” zvichienzaniswa nemakore akare.
Vanotengesera Mumigwagwa Voita hwaKiti naGonzo neMapurisa muHarare
Vanotengesera mumigwagwa vanonzi nhasi vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa ekanzuru, mapurisa eZimbabwe Republic Police, pamwe nemauto, avo vari kurwisa kuda kuburitsa vanotengesera mumigwagwa kubva mukati meguta.
Matongerwo eNyika Okanganisa Mashandiro eMusika weZimbabwe Stock Exchange
Vanoongorora zvemari nehupfumi vanoti zvematongerwo enyika zvakakonzera kuti kutengeserana ku Zimbabwe Stock Exchange kudzikire mumwedzi wapera.
Dare reMakurukota Matsva Rinotoreswa Mhiko
Mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko makurukota ehurumende yavo kusanganisira makurukota anomirira matunhu pamwe nemuchuchusi mukuru.
Vamwe Vanoti Ipai Nguva VaMnangagwa Pane Kuvashora
Vamwewo anoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZanu PF, VaGadzira Chirumhanzu, vanoti vanhu ngavarege kukasika kumedza kutsenga vachada sezvo VaMnangagwa vachangotanga basa vasati varatidza nyika zvavakapfumbata.
Vanopikisa Voshora Dare reMakurukota raVaMnangagwa Rizere Varume Chete
Mapato anopikisa anoti haasi kutambira nemufaro dare remakurukota rakadomwa nemusi weChina nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
Zanu PF Yotarisirwa Kudoma Vakarwa Hondo seVatevedzeri veMutungamiri
Mutauriri weZanu PF, Ambassador Simon Khaya-Moyo vaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa ndivo vane shoko rekupedzisira pakudomwa kwevatevedzeri vavo.
Machechi Haadi Kuti Hurumende Ipindire Mumashandiro Awo
Vemachechi vanoti zvingabatsira chose kana vakuru-vakuru vemuhurumende vakapotawo vachibvunza vakuru vemachechi pezvinhu zvingabatsira nyika mukuti vanhu vagarisane murunyararo.